I-SYFY'S DRAYIVU DRIVE IYENYANYEKA KWAYE IPHEZULU - UKUQHUBA KWEGAZI
Apho Ke Kukho Ujames
I-Syfy's Blood Drive iyonyanyeka kwaye ingaphezulu, ukuba ulapho
Umboniso omtsha we-grindhouse we-Syfy Igazi leDrive ayinabuqili kwaphela okanye ithintele kugonyamelo lwayo oluhlekisayo, kwaye olo luhlobo lwenqaku.
Ukuba ubambe naziphi na iintengiso, iiklip, okanye iiposti zemithombo yeendaba zentlalo kuthotho olutsha lwe-13-episode uzokwazi ukuba umboniso awukho kangako ebusweni bakho njengoko uwuthintela ukuba ube yinyama -ukutya imoto. Isiseko sedystopi sikusa kwilizwe apho iimoto zibaleka egazini lomntu kwaye silandela abalinganiswa lilizwe eliphambeneyo Umdyarho wokufa uhlobo lokhuphiswano, abona bantu baphambili kuthi ingu-Arthur, iphoyisa elime nkqo ngokuchasene nentando yakhe (Alan Ritchson) ehambelana nomqhubi onamava, uGrace (Christina Ochoa). Yigazi leGazi, uyayifumana?
Umboniso ngokuzingca wamkela inkohlakalo yako konke, kwaye awugodli nto. Imilambo yokuhamba kwegazi kwisiqendu ngasinye, apho nayiphi na into ekuthiwa yi-Tababoo isetyenziswe kakubi. Ukutya abantu, ukungcungcuthekisa abanye — uyiqambe ngegama. Ngelixa ixabiso lobuso lolu hlobo lwe-O, Ucaphukile? Ingaba yi kakhulu ? Isimo sengqondo sinokuvela njengongenakunyamezeleka (bamise kamnandi I-hotline yezikhalazo ), kukho into engenakubonakala ngathi iyahlekisa kunye nokungabi nazintloni komboniso. Ayilungele wonke umntu kwaye zilungile ngokupheleleyo kuloo nto. Okwangoku, kukho undoqo weemvakalelo kwibali labaqhubi abathile kwaye njengoko siqhubeka, siqala ukuvula ezinye izinto ezingasemva. Uza endle, kwaye uhlale kubalinganiswa.
Ngokukrakra nangona, ngelixa ndicinga ukuba yonke into yokwazisa iyenza icace gca, ndiyacela qiniseka ukuba uyazi into ongena kuyo kuba ndingakucebisa ngokuqatha malunga nokuphuma Igazi leDrive kuye nakubani na onokuthi abe novakalelo kwimifanekiso enobundlobongela okanye uhlaselo. Xa ubukela okanye ulandela umboniso kumaqonga ohlukeneyo, kukho uhlobo lwesivumelwano esenzeka njengababukeli ekubhekiswa kubo njengabaguli abagulayo abonwabileyo ngamasikizi lawo. Olu hlobo lokuzibandakanya alukho kum, kodwa ndiyabazi abanye abathanda ukuthatha inxaxheba kolo hlobo loluntu. Andinangxaki nayo, kodwa ndicinga ukuba kufanele uyazi ukuba ungena phi ngaphambi kokutsiba kwi Igazi leDrive uloliwe.
I-nostalgia element nayo yomelele ngakumbi, ebonakaliswe kwiphakheji abasithumelele yona ebandakanya i-VHS ecaleni kwezinye iilollies (kuba kaloku uGrace uhlala edla ngokutya iilekese) kunye netshokholethi. Nangona kunjalo, emva kwesaqendu sokutya abantu kufuneka nditsho ukuba ndilumkile kancinci? (PS Ngaba ukhona umntu onomdlali we-VHS endinokuboleka?)
Abalandeli beGrindhouse baya kuyithanda @blooddrivesyfy kulo lonke uzuko lwayo oluhle. Ngaba PS unayo nabani na onomdlali weVHS esinokuboleka kuye?
Iposi ekwabelwana ngalo nguMary Sue (@themarysue) ngoJuni 8, 2017 nge1: 14 pm PDT
Kuninzi kakhulu kumabonakude ngaphandle apho kubunono bayo obuncinci, amagqabantshintshi angenabungqina, kunye nokwenza okunganiki mdla kusinika iimviwo zokucinga ngemeko yomntu. Ndiyayithanda le miboniso, kodwa kukho amaxesha apho ufuna ukubukela umboniso obandakanya imigca enje, Ngaba ukhe wawabona amaxabiso egesi mva nje? Ngenkampu kunye nokuzazi ngokupheleleyo. Ngaba zikho iindlela eziphantsi kwezopolitiko kwiindlela amapolisa ukuqokelela ngokoqobo amazinyo, Inkampani enkulu ixhaphaza amahlwempu, kwaye abantu bathengisa igazi ukuze baphile?
Ewe, kodwa ngamanye amaxesha ufuna ukubukela ezinye iiDudes ezingalunganga ziqhutywa ligazi.
inkanuko buffy umbulali vampire
-UMary Sue unemigaqo-nkqubo engqongqo yokuphawula engavumiyo, kodwa ayikhawulelwanga, ukuthukwa nabani na , Intiyo nentetho egonyamelayo. —
Iyaqhubeka! UCaptain America: Imfazwe yamakhaya iqala ukudubula, ibandakanya uMmeli we-13 kunye neBlack Panther
Ngaba ufuna umdlalo weTrone Minifigs zeLeGO? Abemi beBrick baneyona nto ikufutshane unokufumana
Njani ngaMnye uMhla ngeXesha eliKhawulezileyo ukuSebenza kweMpilo yeNgqondo
UkuKhangela kwakhona okuCharmed kusinika amagama anokubakho oodade abathathu
Iitamatisi ezibolileyo zinokuKwenza uQinisekise ukuba uyibonile iMuvi ngaphambi kokuba uyigwebe. Uhlaziyo!
Bonnie Kunye Neclyde
Ukhethe I-Adventure Yakho
Amacwecwe ali-15 e-Incredible Star Wars Art Art Ukubhiyozela uSuku lweeMfazwe zeNkanyezi
#Landela ngolwesiHlanu: Kate Beaton (@beatonna)
Isibhengezo seNkonzo kaRhulumente: Ungadlala i-Chex Quest 1, 2, 3 simahla
indoda yentsimbi yomvuzo
Misha collins njengomntwana
xa umguvela eqala ukwenza intsingiselo
tyler uthungelwano lwekhathuni lomdali
intetho emnandi emdaka yegolide
Copyright © 2021 blueridgebookfest.org | Umthetho Wabucala